We.com.mm - ကင်ဆာရောဂါကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ စားရမဲ့ အစားအသောက်ပုံစံ (၅) မျိုး
ကင်ဆာရောဂါကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ စားရမဲ့ အစားအသောက်ပုံစံ (၅) မျိုး
ကင်ဆာဆိုတဲ့ရောဂါကြီးဟာ မြစ်ပွားနာ အမြစ်တွယ်ရောဂါတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်သိပ္ပံသုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုပြုချက်အရ ထိုဝေဒနာဆိုးကြီးကိုမခံစားရအောင် ဘယ်လိုအစားစာမျိုးတွေကိုစားသုံး ပေးရမလဲဆိုတော့
၁. အခါးဓာတ်ပါသောအစားအစာတွေကို စားသုံးပေးပါ
ကြက်ဟင်းခါးသီး၊ အလေ့အကျပေါက်လေ့ရှိတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ဘင်္ဂလားဆီးသီးလို့ခေါ်တဲ့ ဆီးသီးတွေမှာ ဗီတာမင်ဘီ၁၂ ပါဝင်နေတာကြောင့် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေတဲ့ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝစွာပါ၀င်တဲ့ သံပုရာသီး၊ ရှောက်သီး၊ လိမ္မော်သီး ၊ ရှောက်ချိုသီး၊ မရမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အစရှိတဲ့အသီးအနှံတွေက ရောဂါပိုးမွှားတွေကို သတ်ဖြတ်နိုင်စွမ်း ရှိတာမို့လို့ စားသုံးပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
ဆန်လုံးတီး၊ ဆန်လုံးညို၊ ကန်စွန်းဥ၊ ပိန်းဥ၊ မျောက်ဥ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်သောလတ်ဆတ်သန့်ရှင်းတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးဝလံများကိုစားသုံးပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက်လေးဆယ်ကျော် အရွယ်များတွင် ထိုကဲ့သို့သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်သစ်သီးဝလံတွေကို ပိုမိုစားသုံးပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
၄. ဆား(အငံ)ဓာတ်လျှော့စားပါ (သို့မဟုတ်)ပေါ့ပေါ့စားသုံးပါ
သုတေတနပြုချက်များအရ အစာအိမ်ရောဂါဖြင့်သေဆုံးသူအများစုဟာ ဆား(အငံ)ဓာတ်ကို တစ်နေ့လျှင် ၁ဝ ဂရမ်မှ ၁၅ ဂရမ်အထိ စားသုံးနေသူများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လည်း လူတစ်ဦးဟာ တစ်နေ့ကိုဆား (၁၀) ဂရမ်ထက်ပိုမိုမစားသုံးသင့်ကြောင်းသိရပါတယ်။
အစားအစာကိုစားသုံးသည့် အခါတိုင်း နည်းနည်းနှင့်အကြိမ်ရေများစွာ စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ စားသုံးစဉ် အစာကိုကျေညက်အောင် ဝါးစားပေးပါ။ ကြာကြာဝါးပေးပါက ခံတွင်းအတွင်းမှ တံတွေးထွက်မှု ပိုမိုများလာတာကြောင့် အစာကိုအလွယ်တကူကြေစေသလို ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ဟု သိရှိရပါတယ်။
ရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့ အစားအသောက် (၁၅) မျိုး
မိုးအေးအေးမှာ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ ပူပူလေး လုပ်စားရအောင်
ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက အလှအပအတွက်ပါ အသုံးဝင်တဲ့ သင်္ဘောသီး
ရေခဲရေသောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ